अनलाइनखबरहब डेस्क द्वारा लिखित समाचार
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 28th July 2021
काठमाडौं । टोकियो ओलम्पिकअन्तर्गत नेपालकी पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। टोकियो आज गौरिकाले महिलाको १ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा नेपालको तर्फबाट इतिहास रचेकी हुन् । हिट चरणमा गौरिकाले १ मिनेट ११ सेकेन्डको समयमा दूरी पार गरिन् ।५० मिटरको लङ कोर्समा गौरिकाले आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान तोडेकी छन् । राष्ट्रिय कीर्तिमान...
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएको छ । नेप्सले बुधबार जीस्वन विकासको ६० लाख ८४ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत गरेको हो । नेप्सेमा सूचीकृत भएसँगै यस संस्थाको आईपीओ अब दोस्रो बजारमा कारोबार हुनेछ ।...
काठमार्डौ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरुलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सांसद पदबाट मुक्त भएको तीन महिनापछि...
काठमार्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीगढीमा नेपालकै पहिलो सिन्धुलीगढी युद्व संग्रहालयको उद्घाटन गरेकी छन्। संग्रहालय उद्घाटनको लागि राष्ट्रपति भण्डारी बुधबार बिहान नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सिन्धुलीगढी पुगेकी थिइन्। कमलामाई नगरपालिकासँगको सहकार्यमा नेपाली सेनाले युद्व संग्रहालय निर्माण गरेको हो । २०७६ कात्तिक २४ गते संग्रहालयको शिलान्यास गरिएको थियो। ६ करोड ५० लाख रूपैयाँको लागतमा निर्माण...
काठमार्डौ । नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले आफूहरु सरकारमा नजाने बताएको छ । नेपाल पक्षबाट डा. विजय पौडेलले भने, हामी तत्काल सरकारमा आउने सम्भावना छैन, पार्टी एकताकै लागि प्रयास गरिरहेका बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार बिहान आफूलाई सहयोग गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएका थिए, जसमा नेपाल पक्षबाट डा. विजय पौडेल...
काठमार्डौ । कक्षा १२ को परीक्षा होम सेन्टरबाटै हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गरेर यस पटक होमसेन्टरबाटै परीक्षा लिने तय भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ । बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले भने, &ldquo;अर्को ठाउँमा जानु...
काठमार्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को लेटर हेडमा मन्त्री मण्डल विस्तार सम्बन्धमा एक प्रेस विज्ञप्ती निकालिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को लेटर हेड दुरुपयोग भएको छ । उक्त प्रेस विज्ञप्तीमा वर्तमान सरकारमा सामेल हुने सन्दर्भमा आज साँझ बसिएको पार्टीको औपचारिक बैठक बमोजिम गरिको निर्णयहरु निम्नानुसार छन् भन्दै बुदागत रुपमा...
काठमार्डौ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। जसपा कार्यकारिणी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी सांसदहरुलाई बर्खास्त गर्न प्रदेशका सभामुखलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सांसदहरु विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सन्तोष पाण्डेलाई सांसदबाट निश्कासन गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको...
श्रीलंकाका अधिकारीहरूले संसारकै सबैभन्दा ठूलो नीलमणि आफ्नो देशमा फेला परेको बताएका छन्। बिबिसीका अनुसार रत्नहरू प्रशस्त पाइने श्रीलंकाको रत्नपुरा क्षेत्रमा केही कामदारले इनार खन्दा उक्त नीलमणि फेला पारेका हुन्। एक जना रत्न व्यापारीले आफ्नो घरको छेउमा इनार खन्न लगाएका थिए। विज्ञहरूले ५१० किलोग्रामको उक्त नीलमणिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अहिले १० करोड डलर...
काठमार्डौ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत बैठक बस्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद बिस्तारलगायत विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 27th July 2021
काठमार्डौ । मन्त्रिपरिषदको मंगलवारको बैठकले प्रभुराम शर्मालाई कार्यवाहक प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । सेनामा बलाध्यक्ष र बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनी अब कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी पाएका हुन् । हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २५ भदौबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । अवकाशको एक महीना अघि विदा बस्ने परम्परा अनुरुप उनले २४ साउनबाट विदा बस्ने...
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले गण्डकी र लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । ...
उमेर नपुग्दै छाला चाउरिने समस्यामा हुनुहुन्छ ? यी उपाए अपनाउनुहोस
काठमार्डौ । उमेर बढेसँगै अनुहारको छाला पनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने ? युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक उपाय अपनाउनुपर्छ । यसका लागि फलफुलमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यी फलफुललाई विशेष...
यी हुन् आँप खानेबित्तिकै खान नहुने खानेकुरा (जानीराख्नुहोस् )
काठमार्डौ । आँपलाई फलफूलको राजा पनि भनिन्छ। स्वाद र सन्तुष्टि दुबैका दृष्टिकोणले आँपलाई धेरैले मन पराउने गरेका छन्। आँपसंग एकसाथ खान नहुने यी खानेकुराहरू हुन् । पानीः आँप खाने बित्तिकै पानी पिउदा आँपको पाचनको लागि आवश्यक ईन्जाईमहरूलाई पानीले निष्तेज बनाई दिनेहुँदा आपको पाचन ठीकसंग नहुने र बिजातीय द्रव्यको उत्पादन धेरै भएर शरीरमा...
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु, प्रदेश प्रमुख हेरफेरको तयारी
काठमार्डाै। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेरअघि बैठक सुरु भएको हो । बैठकले प्रदेश प्रमुखहरुको हेरफेरको निर्णय गर्ने बताइएको छ । आजै माओवादी केन्द्रले यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट हटाएका अमिक शेरचनलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।...
माओवादी निर्णय : अमिक शेरचनलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ । माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख बनाउन शेरचनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ...
नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा
काठमाडौं । नेप्से परिसूचक आज २९.२४ प्रतिशतले बढ्दै अहिलेसम्मकै उच्च ३०७९.६७ विन्दुमा पुगेको छ । यो भन्दा अघि गत आइतबार नेप्से परिसूचकको उच्च विन्दु ३०५८.६४ रहेको थियो । यो अहिलेसम्मकै उच्च विन्दु हो । यसअघि आइतबार नेप्सले उच्च विन्दु छोएको थियो सो दिन ३०५८.६३ विन्दुमा रहेको बजारमा आज रेकर्ड...
पूर्वसभामुख महराले बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालतबाट पाए सफाइ
काठमार्डौ । पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गर्दै महरालाई बलात्कार मुद्दाबाट सफाइ दिएको हो । सभामुख रहेका बेला संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै...
माओवादी केन्द्रले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक
काठमार्डौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आजै बिहान एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि आकस्मिक स्थायी समिति सदस्यहरुको बैठक राखेका हुन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी बैठकमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउनेबारे र पार्टीको...
ओलीको सरकारले जस्तो यो नयाँ सरकारलाई कुनै पनि अपराध गर्ने छुट छैन - गगन थापा
काठमार्डौ । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका बेथिति औंल्याउँदै नयाँ सरकारलाई त्यस्तो कुनै पनि अपराध गर्ने छुट नभएको प्रस्ट पारेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले भने, &lsquo;संसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ । यो अध्यायको सुखान्तका लागि...